Yemukati dhizaini - mazano emachira nemachira Art sens - mazano eimba nebindu
Yemukati dhizaini - mazano emachira nemachira
10.07.2019 Yakatumirwa na: Art Sense
Pfungwa Pamba, Zvemukati, Mapofu uye maketeni
Nepfungwa dzazvino dzemachira nemachira uye kubatanidzwa kwavo mundangariro dzekugadzirwa kwemukati, isu tichaedza kuratidza maitiro akati wandei pamusoro pekushandiswa kwemachira uye mamwe machira akafanana pakushongedza kwemahara madziro emadziro mumba. Kunyangwe vazhinji vachisarudza chete mapofu sechinhu chekupedzisa chemawindo, machira uye maketeni, kunyange achiwedzera kuita, ane hunhu hwavo hunokosha. Panyaya yekugadzirwa kwemukati, ukuru hwavo hahugadzike, nekuti vanogona kuve chinhu chakabatanidzwa chakagadziridza, chinosiyanisa kana chirevo, chingave sechinhu kana chivara. Semuganhuriro kune simba rakasimba rezuva, machira akapeteka anobuda vese vanokwikwidza uye vane ruzha rwakanyanya rwekupinza ruzha. Nekudaro, etheric maketeni anogona kuva ese ari chipingamupinyi pakumisa maziso pasina kubatirira mazhenje ezuva uye panguva imwechete iri chiratidzo chechikamu chemukati chemhinduro. Mikana yacho haina parinogumira uye runako rwavo harungawaniki.
Kushongedza Pfungwa Ne Madziro nemidziyo yemidziyo.
maketeni, maketeni mukati, pfungwa, mazano epamba, zvidzitiro mazano, mazano ekugadzirwa kwemukati, mazano emachira, zvemukati dhizaini yekugara, zvemukati dhizaini, zvemukati dhizaini yekugara, maketeni, maketeni mukati, maketeni mukati, mazano epamba, zvemukati dhizaini, fenicha, zvemukati mazano, dhizaini mazano, imba yemazuva ano, kurongedza mazano, hunyanzvi mazano
Dzimwe pfungwa dzemakenduru nemwenje
Kenduru mwenje inogadzira yakasarudzika ushamwari uye zverudo mamiriro. Paunofunga ...
Kisimusi acorn kushongedza
Pfungwa inonakidza yeKrisimasi acorn yekushongedza. Ronga uye glue pane styrofoam bhora ...
Yakanaka gazebo mubindu
Imwe pfungwa yakakura ye gazebo mubindu, asi panguva ino neakajeka artisheni kuvapo ...
Knitted Cakes kubva Khrushchev Mukanyiwa
Chingwa, zvisinei nechimiro chayo, chinotorwa chakatenderwa uye chikamu chetafura, kwete se ...
Vaka tangi remvura yegadheni
Kugadzira tangi yemvura mubindu kunogona kuve kwakakosha mukukudziridza ...
Isita yai-basket-yemabhokisi ezai
Iyi ipfungwa yakanaka kuti munhu angagadzira sei goko rezai kubva mubhokisi rezai ...
Pumpkin makenduru - iro rinonhuwira pfungwa yekushongedza
Pfungwa yekuti ungagadzira sei makenduru anonhuwirira kubva mudiki mapuru kuti agadzire rakasarudzika maruva ...
Yepakati Yemukati Design - Chinangwa Chemubhedha Pfungwa
Mune mamwe mabhuku ekushongedza emukati takanangana nemazano akasiyana e ...